Conspiracy - Sandal shaped jewels- Kabaha Raaxada - Joornaalka Naqshadeynta
Kabaha Raaxada Khadka Gianluca Tamburini ee "kabaha / qaababka dahabka", ee loo yaqaan 'Conspiracy', waxaa la aasaasey sanadkii 2010. Kabaha khaa'innimada ayaa si dardar leh isugu daraya tikniyoolajiyadda iyo suuxinta. Ciribta iyo ciribta waxaa laga sameeyay walxaha sida aluminium khafiifka ah iyo aluminiumka, wich waxaa lagu tuuraa qaababka sculptural. Xirashada kabaha ayaa markaa lagu muujiyey dhagxaan / dhagxaan qaali ah iyo waxyaabo kale oo qurux badan. Tikniyoolajiyadda sare iyo agabyada goynta ayaa sameeya farshaxan casri ah, oo leh qaabka sandal, laakiin halka taabashada iyo khibradda farshaxan yaqaanada Talyaani ah ay wali muuqdaan.
Magaca mashruuca : Conspiracy - Sandal shaped jewels-, Magaca naqshadeeyayaasha : Gianluca Tamburini, Magaca macmiilka : Conspiracy by Gianluca Tamburini.
Kabaha kabaha, kabaha iyo kabaha naqshadeynta
Kabaha Raaxada Gianluca Tamburini Conspiracy - Sandal shaped jewels-